Kooxda Barcelona oo weyn doonta Ciyaaryahan muhiim ah - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Kooxda Barcelona oo weyn doonta Ciyaaryahan muhiim ah
Kooxda Barcelona oo weyn doonta Ciyaaryahan muhiim ah
Barcelona ayaa u baahnaan doonta inay qaar kamida xiddigaha kooxdeeda iska dirto si ay maalgelin dhaqaale ugu hesho heshiiska riyada ee ay ku dooneyso inay Neymar dib ugu soo celiso kooxdeeda.
Mid kamida xiddigahaas ayaa ah Philippe Coutinho kaas oo 18 bilood kahor kaga soo biiray dhinaca kooxda Liverpool balse ay ku adkaatay inuu helo qaab ciyaareedkiisii ugu wacnaa ee uu ku qancin lahaa kooxdaas.
Manchester United ayaa lagu sheegay koox mudo dheer xiiso usoo haysay Coutinho halka kooxdiisii hore ee Liverpool iyo Paris Saint-Germain ay yihiin kuwo xaaladiisa dusha kala socda.
Wargeyska Express Sport, ayaa daabacay in ciyaaryahan Philippe doonayn inuu uwareego Man United sababtuna ay tahay inuu wali daacad u yahay kooxdii uu hore ugu soo ciyaaray ee Liverpool oo ay United xifaaltmaan.
Previous articleSAWIRO:-Isbeddel lagu sameynayo Amniga Kismaayo, kadib weerarkii ka dhacay
Next articleDHAGEYSO: Barnaamijka Cayaaraha ee Radio Risaala 14-07-2019
Ciidamo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa goordhow waxaa ay koofurta magaalada Gaalkacyo ay ku toogteen nin hubeysan sidda ay xaqiijiyeen Saraakiisha Ciidanka. Ninkaan la...